Ihe ato ato kachasi elu ka icheta maka B3B Blogging | Martech Zone
Na-akwadebe maka Ahịa Ahịa Azụmaahịa na Nzukọ Azụmaahịa na Chicago, M kpebiri na m whittle m ngosi slide ka a iferi kacha nta. Ihe ngosi ndi nwere otutu ihe bu IMHO, egwu na ndị ọbịa adịkarịghị echeta ozi ọ bụla ewepụtara.
Kama, Achọrọ m ịhọrọ okwu atọ nke kwesịrị ịrapara n'isi ndị ahịa mgbe ọ bịara B2B ịde blọgụ. Nakwa, Achọrọ m itinye ihe ngosi siri ike ka ndị mmadụ wee cheta ozi ahụ.
M họọrọ ihe osise nke Seth Chinekein. Ndị mmadụ na-asọpụrụ Seth n'ihi na ọ bụ onye ndu echiche na ụlọ ọrụ Marketing na Mgbasa Ozi. Seth na-agba mmiri megide nke ugbu a ma nwee onyinye maka ịkọwapụta ọdịda nke ọkwa otu ọfụma. Ọ na-eme ka anyị chee echiche. Onye ọ bụla nwere ekele maka onye ndu echiche ma bụrụ onye amara dị ka otu pụrụ iche maka azụmaahịa gị. A blog bụ usoro zuru oke iji mata dị ka onye ndu echiche.
Ndị mmadụ enweghị mmasị n'ịgụ okwu na ibe, ọ na-amasị ha ịnụ olu mmadụ. Dị ka ihe atụ, nke a bụ obere visual nke Jonathan Schwartz, Blogger na CEO nke Sun Microsystem vs. Samuel J. Palmisano, Onye isi oche nke Board, IBM - na-elele ọnụ ọgụgụ nke ibe nke njikọ na saịtị ha.
Amaghị m onye onye isi oche nke Board maka IBM bụ mgbe m nyochara nke a.
Okwu ikpe azu bu egwu. Ọ bụ ihe na-akwụsị ọtụtụ azụmaahịa ịnweta blog na-agba ọsọ. Jọ iwepụ akara nke ika ahụ, egwu nke okwu ọjọọ, egwu ndị mmadụ na-atụ aka ha ma na-achị ọchị, egwu ikwu eziokwu. Offọdụ n'ime stats na-arụtụ aka na etu egwu si ebibi ikike ụfọdụ nwere ike ịdọta ndị na-agụ akwụkwọ na nlebara anya. Offọdụ n'ime stats ndị ọzọ na-arụtụ aka na ụlọ ọrụ ndị meriri ụjọ ha ma debe ya niile ka ndị mmadụ gbarie… ha na-emeri n'ihi ya.
Egwu abughi atumatu. Otu onye gwara m n’otu oge na ị gaghị agba ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ị na-ele anya n’azụ gị mgbe niile. Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị nchebe ma na-atụ egwu amaghị. Ihe na-eju anya bụ na ụjọ kachasị ha nwere ike bụrụ eziokwu n’ihi na ha emerighị ha.
Tags: b2b ịde blọgụ
Sep 20, 2007 na 12: 43 AM
Ihe ato ndia ikwuru bu ihe mkparita uka na ulo m. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na isi 1 na 2 bụ mkparịta ụka dị mfe. Onye ọ bụla na-abụkarị na otu peeji na-anabata ha dị ka eziokwu. Isi nke 3, abụwo okwu na-atụgharị anya kemgbe ogologo oge. Ndi mmadu nwere ike inweta ya ma obu ha enwetaghi. Enweghị m ike ịgwa gị ugboro ole okwu banyere okwu ọjọọ batara dịka ihe kpatara ịghara ime n'ụdị soshal midia. Ọbụna nke a ruru egwu nke onye asọmpi na-emebi anyị site na ịgha ụgha *. Ọgụ ahụ gara n'ihu.
Sep 20, 2007 na 7: 23 AM
Ozi ọma ahụ bụ na ọ nweghị iwu ọ bụla na nlekota nyocha na b2b blog azụmahịa. Ọ dị nfe dị ka iwepụta 'ọmarịcha iwu' ebe a na-ahazi azịza niile ma na-egosi na eleghara ihe ọ bụla anya ma ọ bụ zaghachi ya n'onwe ya. Enwere m ihe karịrị 3,000 kwuru na blọgụ m ma dee naanị mmadụ 2 wee gwa ha na agaghị m etinye okwu ha.
Naanị jide n'aka na ị ga - eme ka ndị mmadụ mara ihu - nke a bụ blog azụmaahịa iji mepee nkwukọrịta maka ndị ahịa gị ma chọta azịza - ọ bụghị oghere mepere emepe iji bulie ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ndị a bụ ndị ahịa na-ewe iwe, ohere ịdeghachi ha n'onwe ha ma nyere ha aka ịpụ nwere ike ime ka ha gbanwee!
Iguzi oke bụ ihe dị mma maka ikpo okwu ịde blọgụ ọ bụla. Site na blọọgụ B2B, m ga-ekwusi ike na ya!
N'ụzọ na-emegide onwe ya, okwu gbasara nleghara anya na azụmaahịa bụ na ndị mmadụ anaghị ahụ azụmaahịa dịka 'ndị mmadụ'. Ọ dịkarịsịrị mmadụ ịgwa mmadụ ụzọ ha ga-esi dee azụmahịa. Ana m ekwu okwu site na ahụmịhe… M ga-emechu azụmahịa mgbe m dejupụtara ha 'kpọtụrụ anyị', mana mgbe mụ na ha nọrọ n'ekwentị m maara na ọ naghị abụkarị ihe kpatara onye ahụ na njedebe nke ọzọ yana m na-ekwu ya .
Inwe blọọgụ na - enye ndị ahịa otu onye ga - ahụ ma mata - na - ebelata ihe egwu ha nwere ibido agha na ntanetị.
Sep 20, 2007 na 1:33 PM
Daalụ maka nzaghachi. Bring na-eweta ezigbo isi. M na-agbasaghị ịdenye aha na "ndị na-abụghị moderated kwuru" ụlọ akwụkwọ nke na-elekọta mmadụ media. Naanị m na-eche na ọ na-enye ndị na-agụ akwụkwọ / ndị na-eri ihe mgbasa ozi ikike ụfọdụ. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a na-atụnye ụjọ n'ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ m. Ikekwe m ga-eme ka ụzọ m dị nro dị nro.